गैंडालाई उत्तानो पारेर झुण्ड्याउनेलाई आईजी नोबेल पुरस्कार ! « News24 : Premium News Channel
गैंडालाई उत्तानो पारेर झुण्ड्याउनेलाई आईजी नोबेल पुरस्कार !
काठमाडाैं । गैंडालाई उत्तानो झुण्ड्याउँदा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे गरिएको एउटा अनुसन्धानले यो वर्षको आईजी नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । नक्कली नोबेल वा व्यङ्ग्यात्मक नोबेल पनि भनिने यो पुरस्कारको ख्याति नोबेल पुरस्कारको जस्तो नभए पनि यसलाई महत्वपूर्ण पुरस्कार मानिन्छ ।